Zuma nọrọ afọ itoolu n'ọkwa, lee ihe aga eji lota ya - BBC News Ìgbò
Zuma nọrọ afọ itoolu n'ọkwa, lee ihe aga eji lota ya
Media captionZuma bụ onye egwu
A kpọrọ ya "onyeisiala ndị ọha" - onye na ada ebube, bụbu onye a tụnyere n'ụlọ mkpọrọ maka mbọ ọ gbara maka itụhapụ Saut Afrịka n' ịkpaoke agbụ.
Ọ gụghị akwụkwọ, ma rigoro n'isi ndọrọndọrọ na mba Saut Afrịka.
Mana n'ime afọ iri na ise gara aga, e jizi mpụ na aghụghọ mara Jacob.
Iwe na-ewe ndị mmadụ maka ebubo na Zuma rapụrụ ndị Indịa ji egoachụego - Ndị be Gupta - ka ha nweta ọrụ gọọmentị na-erụ-erụ. Zuma na ndị be Gupta gọrọ agụgọ ebubo a.
Jacob Zuma etinyela akwụkwọ arụkwaghịm
Ọzọ dịka ya, e nwere ebubo mpụ pụtara mgbe Zuma ji dọla nde kwuru nde rụgharịa be ya n'obodo ha bụ Nkandla. Ego a bu ego e kwesiri iji mezie nchekwa n' ụlọ ahụ mana e jizi ya ruọ ihe dịka ebe a na-egwu mmiri na ebe ọkụkọ na-anọ.
Zuma kwughachiri ego ahụ eji rụọ ọrụ a.
Nkenke aha onyonyo "Ọ ka mkpa ịwepụ Jacob Zuma n'ọrụ ka osote onyeisiala na mba, naka ka onye so gọọmentị" - Mbeki
Jacob Zuma siri ụzọ tere aka bịa site na ebe a mụrụ bụ be onye ogbenye. Nne mụrụ Zuma bụ odibo, Zuma na onwe ya bụbu ọchị ehi.
Ụdi ebe a Zuma siri pụta mere ọtụtụ mmadụ na Saut Afrịka jiri kwenye na ya mgbe ọ pụtara ịzọ ọkwa onyeisiala n'okpuru pati ya bụ ANC ụgbọrọ abụọ.
Ọ bara ANC mgbe ọ bụ okorobịa, e soro tụọ ya nga na Robben Island maka ịchọ ikwatu gọọmentị obodo ha mgbe ahụ.
ANC 'sị na ha ga achụ Zuma'
Ka a tụhapụru ya, ọ gbapụrụ na mba ha were nọ ọtụtụ afọ na mba ọzọ, ma na rigote n'ọkwa n'ANC.
O so na ndị gbara mbọ ịkwụsị ọchịchị ndị ọcha ma hu na Nelson Mandela bụrụ onyeisiala Saut-Afrịka.
Media captionMgbe ọgwụgwụ abịala - Mandela
Jacob Zuma rụrụ ọrụ dịka osote onyeisiala n'okpuru Thabo Mbeki - bụ ezigbo enyi ya mgbe ahụ.
Mana ha abụọ sere okwu, Mbeki mecha chụọ ya na 2005 maka ebubo mpụ na aghụghọ.
Mana, ọ dị ka ọ bụ Zuma chịrị ọchị ikpeazụ. A kagburu ebubo ndị ahụ eboro ya, ọ bịa bụrụ onyeisi ANC n'afọ 2007, Mbeki na onwe ya, bụrụzia onye a chụturu n'ọkwa.
Ebubo na ọ wakporo nwata nwaanyị achụsịghị Zuma iwu ewu na Saut Afrịka. Ikpe amaghị Zuma, mana o kwetere na ya na ya bụ nwaanyị nwere mmekọ Zuma agbanyeghị na o nwere ọrịa obirinajaọcha.
N'ime ihe pụtara mgbe a na-ekpe ikpe a bụ na Zuma sị na ya weturu ohere ya inweta HIV maka na ya sara ahụ ka o mechara mmekọrịta ahụ. Ihe a mechara bụrụ ihe e ji akpa ukaọchị na Saut Afrịka ka onye osise jiri se ya ka obu shower n'isi na-ejegharị. O kwuru maka mkparị a na ajụjụọnụ ya na BBC nwere n'afọ 2009.
"Okwu a saa ahụ, asaghị ahụ abụghị ka m siri kwuo ya. Mgbe m na-akowa ihe mere na mgbede ahu n' uloikpe, onweghị mgbe m kwuru na ịsa ahụ na-agwo ọrịa obirinaajaọcha. Ihe m kwuru bụ na ọ bụ ụzọ mgbakwunye iji chekwa onwe m. Mgbe ọbụla iji aka gị eme ihe, ọsọkwa ya bụrụ ibi alibasa, ị ga-asa aka."
Nkenke aha onyonyo "E kpebiri m na m ga eji obi m na ike m arụrụ obodo anyị ọrụ" - Zuma
N'ajụjụọnụ ọzọ o mere na BBC tupu ọ bụrụ onyeisiala, Jacob Zuma kwenyere na ya azohiela ụkwụ ọtụtụ mgbe, mana ya siri na ha mụta ihe. Ọ gọkwara na aka ya adịghị na mpụ.
Ọrụ Zuma rụru na iwetu ikpa mgbe o na arụ orụ ka onyeisiala abughi ihe a na ahu anya. Ndị kwenyere na ha na atụ aka na ihe o mere banyere ihu na ndị mmadụ nwere ohere iga akwụkwọ nakwa ike ogwu mmgbochi HIV. Mana akụnụba Saut Afrịka nyụrụ ka ọkụ mgbe ọchụrụ onye na ahụ maka ego na mba ha na afọ 2015.
Media captionZuma kọwara maka okwu shawa
Egwu tụrụ ndị mmadụ na ndị mba Saut Afrịka ga-agbahapụ otu duru ha rue mnwereonwe ha n'afọ iri abụọ gara aga
N'ihi nke a, echere na ya bụ Zuma iduru ha gaa na ntuliaka nke 2019 ga-abụ nnukwu ihe ọghọm
Na nzụkọ nke otu ANC, Jacob Zuma kwụchiri ebe ọnọ , ọ na takwa mmasị nke ndị mba ọzọ ụta, n'ekwu na ha na-achọ ịchutu ya n'ọkwa
N'ikpeazụ, ọpụpụ ya sị n'ime otu ya were pụta: Nsọgbu ọ na-enwe butere nkewa dị ukwu, kpata kwa na otu ha bụ ANC amasịghị ndị mmadụ ka o sị dị na mba.
A ga-enyewe ụmụnwoke ọgwụ mgbochi nwa - Ndị dọkinta
Nwaanyị esiela ma rie nwa ya
Ebe ụmụakwụkwọ abụọ mahadum Babcock siri daa iwu